तेस्रोलिङ्गी अजिताको बलात्कारपछि विभत्स हत्या ! – Sawal Nepal
तेस्रोलिङ्गी अजिताको बलात्कारपछि विभत्स हत्या !
पत्रपत्रिका ७ माघ २०७६, मंगलवार ११:५३
हेटौंडा/ हेटौंडाकी तेस्रोलिङ्गी अजिता भुजेलको बलात्कारपछि हत्या भएको बताइएको छ ।
शनिबार हेटौंडा–५ क्याप्पा डाँडामा मृत भेटिएकी अजिताको बलात्कारपछि हत्या भएको तेस्रोलिङ्गी अधिकारकर्मी सूरजकिरण थापाले दावी गरेका छन् । लैंगिक अल्पसंख्यक अधिकारका लागि काम गर्दै आएकी भुजेलको शव विभत्स अवस्थामा फेला परेको थियो ।
भुजेलको घटना रहस्यमय रहेकाले गहिरो अनुसन्धानका लागि शवको विस्तृत जाँच गर्न त्रिवि शिक्षण अस्पताल शनिबार नै ल्याइएको छ । अधिकारकर्मी थापाका अनुसार भुजेल नग्न अवस्थामा भेटिएकाले बलात्कार भएको हुनसक्ने अस्पतालका चिकित्सकले बताएका छन् ।
हेटौंडा–११, नवलपुरकी २९ वर्षकी तेस्रोलिङ्गी अजिताको शवको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पोस्टमार्टमपछि नवलपुरमा सोमबार दाहसंस्कार गरिएको छ । पोस्टमार्टममा अजिताको घाँटीमा निलडाम, टाउकोमा चोट देखिएको चिकित्सकले बताएको अजिताका फुपाजू देवबहादुर थापाले जानकारी दिए । नेपाल समाचारपत्रबाट
निषेधाज्ञा घरभित्रै रहनुहुन्छ? यसरी लिनुस् फि‍ट रहने प्रेरणा